Apple dia namoaka tifitra fohy miorina amin'ny iPhone ary tarihin'i Damien Chazelle | Vaovao IPhone
Apple dia namoaka horonantsary fohy voatifitra miorina amin'ny iPhone ary tarihin'i Damien Chazelle
Amin'ny fahatongavan'ireo fitaovana finday vaovao, a fifanakalozan-kevitra momba ny fakana sary sy ny fomba fandraisam-peo. Manohy amin'ny marindrano amin'ny androm-piainana ve isika? Afaka manaiky horonantsary mitsangana ve isika? Ho an'ny tsiro loko, amin'ny farany dia tsara kokoa ny manao izay tianao, ary eny, afaka mamorona feo mamorona mitsangana ianao. Ary raha tsy izany dia lazao amin'i Apple izao Damien Chazelle. Ity dia nitarika fitifirana fohy vaovao miaraka amin'ny iPhone 11 Pro. Mampientam-po ny valiny ... Aorian'ny fitsambikinana dia omenay anao ny antsipirian'ny Ny Stunt Double, ny fohy vaovao avy amin'ny fampielezan-kevitra Apple's Shot amin'ny iPhone.
Araka ny efa hitanao, mandrisika anao hatrany am-boalohany izy ireo hametraka ilay fitaovana hahitantsika ny sary mihetsika fohy, CINEMA VERTIKA Miseho mandritra io filaharana io ary efa milaza amintsika kely momba ny momba ilay zavatra. Ho an'ireo izay tsy maneno lakolosy, Damien Chazelle no talen'ny La La Land (nandresy ny Oscar ho talen'ny tsara indrindra amin'ity sarimihetsika ity) sy ilay (mahatalanjona) Whiplash. Horonantsary fohy 9 minitra izay, araka ny lazainay aminao, dia nalaina tamina iPhone 11 Pro ary ny sary rehetra dia voatifitra mitsangana. Mandritra ny horonantsary fohy dia ahitantsika ireo marika izay manondro ny sasany amin'ireo toetra ampiasain'ny isaky ny fizarana: ny elanelam-potoana maharitra, ny fanamafisana ny horonantsary, ny mason-joro faran'izay malalaka, sns.
Ary araka ny hitanao tamin'ny horonantsary teo aloha, Miaraka amin'ilay horonantsary fohy navoaka ny Making Of ny mitovy. Ao anatin'izany no ahitanao ny fomba nampiasana ny iPhone isaky ny tifitra, mazava ho azy fa mampiasa fitaovana sinematografika izy ireo na dia mahagaga aza ny mahita ny fomba nitifirana azy ireo ny sary vitsivitsy nalaina tamin'ny tanàn-tànana iPhone ary misy valiny tsy mampino noho ny fanamafisana ny horonantsary an'ny iPhone 11 Pro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 11 » Apple dia namoaka horonantsary fohy voatifitra miorina amin'ny iPhone ary tarihin'i Damien Chazelle
Ireo no fepetra apetraka amin'ny app ho default ao amin'ny iOS 14